Iindlela ezi-6 zokuMisa inja ekuhlafunweni - Inja Training
Iindlela ezi-6 zokuMisa inja ekuhlafunweni
Ukuhlafuna ngumsebenzi we-canine wendalo kwaye usempilweni othoba iintsini ezinamazinyo, utshise amandla agqithisileyo, unciphise uxinzelelo, kwaye uncede ii-canines zijongane noxinzelelo. Ngelishwa, ukuhlafuna inja kunokuba kungakhethi, ke fundisa isilwanyana sakho umahluko phakathi kokuhlafuna okwamkelekileyo nokungamkelekanga.
Amanyathelo okuyeka ukuhlafuna
UCesar Millan , umqeqeshi wezinja oqeqeshiweyo kunye nomsasazi weenkqubo zikamabonwakude Ukusebeza Inja , iphakamisa ukuthatha amanyathelo ezintlanu ukunqanda inja yakho ekuhlafunweni.
Gcina upholile : Ukukhwaza inja kuya kuyenza ixhala kuphela, kwaye inokufuna ezinye izinto ukuze zihlafune.
Lungisa inja : UMillan ucebisa ngokuthinta ukukhanya kwindawo yentamo. Ngokufanelekileyo oku kuya kuyenza ingqalelo yenja yakho kwaye ikuvumele ukuba umhambise kude nento.
Phazamisa inja : Sebenzisa inyango okanye into yokudlala efanelekileyo ukuze ufumane ingqalelo yenja.
Banga into leyo : Thatha into uyenze icace kwinja ukuba le nto yeyakho. UMillan ucebisa ukusebenzisa ulwimi lomzimba ukufezekisa oku.
Nika izinto ozohlafuna : Nika iithoyi ezikhuselekileyo kwinja yakho. Izinja zisebenzisa ukuhlafuna ukuzolisa imithambo-luvo, ke kuya kufuneka ubeke endaweni yakho into oyithathileyo.
Unonophelo lweCanine Geriatric
Iinkcukacha zeNja eyonwabisayo
Inja ekrelekrele yeHlabathi
Iindlela ezizezinye zoQeqesho
Ngelixa indlela kaMillan inokusebenza ngokumangalisayo nezinye izinja, umnini onendlela eyahlukileyo yoqeqesho okanye inja enobushushu obahlukileyo inokwenza ngcono ngenye indlela. Zama ezi ndlela zingezantsi de ufumane enye esebenza nesilwanyana sakho sasekhaya.
Sebenzisa indumiso ukukhuthaza ukuhlafuna okufanelekileyo
Ukudumisa kunokuba yindlela efanelekileyo yokuqeqesha izinja ekuhlafuneni izinto ezingafanelekanga. Xa ubamba inja yakho ihlafuna into akufuneki:
Inombolo ye-gucci bag yenombolo ekhangela kwi-intanethi
Faka into yokudlala endaweni yokuhlafuna, enjengeNylabone okanye iKong.
Mncome kakhulu ngokuhlafuna into efanelekileyo.
Sebenzisa i-Apple ye-Bitter njenge-Deterrent
Oogqirha bakwacebisa ukunyanga into ongafuni ukuba inja ihlafune ngemveliso engathandekiyo enjeni, enje iapile ekrakra . I-apile ekrakra ayisiyityhefu kwaye inokuboliswa ziintsholongwane ezinokusetyenziswa ngokwezihloko kwizibrari zokuyekisa inja yakho ekuhlafunweni nasekukhothweni. Ingasetyenziselwa ifanitshala, iintambo zombane kunye nokubumba ukuthintela inja yakho ekuhlafunweni. Kuya kufuneka iphinde isetyenziswe rhoqo kwiintsuku ezimbalwa kuba iyaphela. Ivenkile yokugcina izilwanyana zasekhaya kufuneka ibe neempawu ezininzi zokuthintela kwisitokhwe.
Ukukhuthaza ukuzilolonga kunye nokukhuthaza ingqondo
Kuyamangalisa ukuba yintoni umahluko phakathi kokuzilolonga ngokufanelekileyo kunye nokuvuselelwa kwengqondo okunokwenza ekupheliseni indlela ohlafuna ngayo.
Thatha inja yakho uhambe rhoqo kwaye udlale ibhola. Fumana ukubetha kwentliziyo yakhe. Ukuzivocavoca kubonelela ngamandla akhe kwaye kuthatha ingqondo yakhe ukuhlafuna okwethutyana.
Gcina inja yakho ivuseleleke ngokwengqondo ngokuphatha iithoyi. Ungabeka isidlo sakhe sangokuhlwa okanye uphathe kuyo kwaye umyeke abethe into yokudlala ukuze akhuphe ukutya. Ungazifumana ezi zinto zokudlala kwivenkile yezilwanyana zasekhaya okanye kwiikhathalogu.
Yenza iiseshoni zoqeqesho olufutshane amaxesha ngamaxesha ngemini. Izinja zinendawo emfutshane yokujongana nokuphindaphinda kubaluleke kakhulu. Faka uqeqesho kubomi bemihla ngemihla kangangoko kunokwenzeka. Sebenzisa Hlala / Hlala ukucelwa, Phantsi / Hlala ngelixa nifumana isidlo sangokuhlwa kunye ngelixa nisatya, kwaye Yiza ngelixa udlala ibhola. Sebenzisa Hayi ukuxelela inja yakho ukuba ingabambi into embi.
Ubungqina beNja kwiKhaya lakho
Beka zonke izinto ongafuni ukuba izinja zakho zihlafune. Kufana nokuqinisekisa ubungqina bendlu yakho. Yiya emgangathweni phantsi kwinqanaba lenja yakho. Nantoni na inja yakho enokufikelela kuyo ongafuniyo ukuhlafunwa kufuneka igcinwe kude. Ungalibali ukulumkisa iindwendwe zakho ngokunjalo. Banokungena endlwini bakhulule izihlangu, emva koko umntwana wakho angaziphatha njengezinto zokudlala ezintsha.
Yiba nebhasikithi efanelekileyo kwizinto ofuna ukuzigcina zingafikeleleki. Ukuba inja yakho iyakwazi ukufumana into engekho mda, zibeke ityala ngokulibala ukuyibeka kude. Ungayithethisi inja yakho engekayazi ngcono. Kuya kufuneka umfundise into eyamkelekileyo ukuhlafuna kunye nengavumelekanga.
Izinto ezamkelekileyo zokuhlafuna inja
eyona misebenzi mihle yokonga kwiigrads ezintsha
Qinisekisa ukuba inja yakho inezinto ezininzi ezamkelekileyo zokuhlafuna ezifumanekayo kuye, kodwa qiniseka ukuba umjongile kuba ezinye izinto zinokubonisa ingozi yokuchama njengoko zinxiba. Ezinye izinto onokukhetha kuzo zibandakanya:
Nylabones -Iinylabones zenziwe ngeyiloni ecinezelekileyo. Bayothuka xa behlafunwa, endaweni yokuqhekeka, kwaye bayanceda ukucoca amazinyo enja. Qinisekisa ukuba ukhetha ubungakanani obufanelekileyo besilwanyana sakho kwaye uthathe ukuhlafuna xa unxiba kancinci ngokwaneleyo ukuba ube yingozi.
Ukuhlafuna amazinyo-Ezi zihlafunayo zinceda ukwanelisa imfuno yenja yakho yokuhlafuna ngelixa zikwanceda ukucoca amazinyo kunye nokuphefumla.
IiKongs -Ezi zinto zokudlala zerabha ezilukhuni ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye needigital zobunzima kwaye zinokugcwaliswa ngethanga, iibhanana, ibhotolo yamandongomane, itshizi cream okanye okunye ukutya okumnandi. Ukuqandusela i-Kong egcwele ukutya kuyenza ihlale ixesha elide. I-Nylabones iza ngobukhulu obahlukeneyo, izimbo, imibala kunye noburhabaxa beendlela ezahlukeneyo zokuhlafuna.
Iintonga Zokungcungcuthekisa - Le nto ihlafunwayo yenziwe ngeetoni zomileyo. Ukuhlafuna kugaya kakhulu, kwaye kubonakala ngathi izinja ziyazithanda.
Qiniseka ukuba uyayincoma inja yakho xa ihlafuna izinto ezilungileyo. Uya kudibanisa indumiso nento kunye nokuhlafuna kwakhe, kwaye oku kuya kukhokelela ekubeni akhethe izinto ezihlafunwayo ezifanelekileyo ngalo lonke ixesha.
Cinga Njengenja Yakho
Akunakwenzeka ukufundisa ii-canines umahluko phakathi kokulungileyo nokungalunganga kwezinto ezihlafunwayo, kodwa kufuna umonde kunye nokuzingisa. Inja yakho ifuna ukukukholisa, ke kufuneka umfundise imigaqo ngendlela evakalayo kuye. Ungaguquguquki, bambelela kwigama elinye lemiyalelo eqondwa ngokulula, kwaye unike izinto ezininzi ezifanelekileyo ukuba inja yakho ihlafune.
Izithuthi Imihla Yokuzalwa Impahla Icardio Ngaphakathi Design Basics
iinkawu onokuba nazo njengezilwanyana zasekhaya
ingaba isvv inobunzima obungakanani
Inja yam ayisayi kulala ubusuku bonke
litshisa ixesha elingakanani iti
Izinto zokuthetha emva kokuqhekeka
Umsebenzi Ungcali Udliwanondlebe
Iikhompyuter Ne Software